Dhaabonni qabsoo hidhannoon mootummaa garagalchuuf hojjetan hin milkaa'an jedhu muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa
Onkoloolessa 27, 2015
Qabsoo hidhannoon mootummaa garagalchuuf kanneen hojjetaa jiran – humnonni mormitootaa bu’aa akka fiduu hin dandeenye mirkanummaan ka dubbatan ta’uu paarlaamaa biyyattiif ibsanii jiran Muummichi ministaraa Itiyoophiyaa Obbo Haile-mariyaam Dessaalenyi. Kanneen Shaabiyaa waliin hiriiran ittiin jedhanis, otuu yeroo isaanii hin gubiin yoo gara karaa nagaatti deebi’an wayya jedhan.
Akka Iskindir Firew Finfinne irraa gabaasetii, muummichi-ministaraa Itiiyoophiyaa Obbo Hayile-maariyaam Desaaleyi, har’a Mana-maree Bakka-bu’ootaa Itiyoophiyaatti argamuun isaanii, gaaffiilee miseensota irraa dhihaataniif deebii kennuuf ture. Prezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatuu Tashoomee, xiyyeeffannaa mootummaa, ka waggoota shanan dhufanii ilaalchisuudhaan, akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti, Fulbaana 24, walga’ii gamtaa manneen maree lameeniif haasaan baninsaa dhageessisan immoo, ittiin ka’insa marii sanaa ture.
Akkuma haasawa prezidaantichaa, marii har’aa kana irrattis dhimmootni hedduun ka xiinxalaman yoo ta’u, dhimmi lammiwwan Itiyoophiyaa biyyoota alaa jiraataniis ka’ee ture.
Biyya isaanii fi uummata isaanii gargaaruuf kanneen sochii adda addaatti jiran – lammiwwan Itiyoophiyaa ala jiraatan ka jiran ta’uu ka dubbatan – Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Hayile-mariam Dessaalenyi, “kanneen faallaa sanaa dhaabbatan” – ittiin jedhanis ibsanii jiran. Keessumaa, kanneen “humnaan mootummaa gargalchuuf hojjetaa jiru” jedhan ilaalchisee ennaa dubbatan, “qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun, waan hiika kennu miti” – jedhan.
Meeshaa waraanaatiin mootummaa gargalchina – qaamotiin jedhan, kanneen hiika hin kennine ta’uu isaa haala itti uummatni hubatee jiru waan ta’eef, sabaabaa kanaan maallaqa warri Daayasporaa gowwaan kennan sassaabuuf jecha irraa kan hafe waan hiika qabu akka hin ta’iin beekamaa dha. Amma immoo, dhugumatti, warri maallaqa xiqqoo baasan illee harka isaanii sassaabbachuu jalqabanii jiran. Ragaalee adda addaan waan mikaneeffataniif jechuu dha, jechuun itti fufanii dubbatan.
Qabsoo hidhannootiin, mootummaa garagalchina – jechuudhaan, humnoonni Shaabiyaa waliin hiriiran, gara karaa nagaatti dhufuu qabu – jechuudhaan ennaa ibsanis, Mootummaan Shaabiyaa ofii isaaf iyyuu hin taane “nu deggera” ka jedhu – abdii hin qabatamne qabatanii kanneen achi taa’anis yoo tahe, akka yaada keenyaatti, dhimma kana dhiisanii, biyyi isaanii misoomaa fi guddataa jirtu biyyi isaanii, yoo yaada addaa qabaatanis karaa dimookiraatawaa ta’een haala dhiheeffachuu danda’an irra waan jirtuuf kana dhiisanii gara karaa nagaatti dhufuu wayya ittiin jenna. Garuu, karuma kana itti fufna – yoo jedhan ammoo, wal-gargaarsa mootummaa fi uummata Itiyoophiyaatiin, bakka kana ga’a – ka jedhamu bu’aa fiduu akka isaan hin dandeenye mirkaneessinee dubbachuu dandeenya. Akkasumatti haala yeroo isaanii balleessuutti jiran jira – jennee fudhanna.
Hoogganoonni dhaabbatoota kanaa tokko tokko yaadni kun isaaniif hin liqimsamu – ka jedhan, muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, kaayyoon hoogganoota kanaa, maqaa dhaabota maqaaf malee hojiidhaan hin jirreetiin daldalanii bu’aa argachuu akka ta’etti dubbatan.
Dhaabbatoonni kun qabsoo gaamtaa mootummaa fi uummatni waliin geggeesseen dadhabsiifaman – jedhu – Obbo Hayile-mariyaam Dessaalenyi.
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, waa’ee dhaabota qabsoo hidhanoon socho’anii yaadni kennan kun, mutii mootummaan isaanii kenne ka biraa wajjiin wal simatee jira. Kanneen dhiheenya gara Itiyoophiyaatti deebi’an – dhaaba “Sochii Dimookiraasummaa Ummata Tigiraay” yokaan “Demihiit” jedhee of waamuf miseensota ka ta’aniif, mootummaa isaanii dhiifama gochuu isaa kaleessa beeksise.